Wasiir Islaaw iyo Yariisoow oo Imaamka iyo Ugaaska Mudulood been u sheegay (XOG-DHAB ah) - Muqdisho Online
Home News Wasiir Islaaw iyo Yariisoow oo Imaamka iyo Ugaaska Mudulood been u sheegay...
Wasiir Islaaw iyo Yariisoow oo Imaamka iyo Ugaaska Mudulood been u sheegay (XOG-DHAB ah)
Iyadoo dagaal culus oo u dhexaaya labo maleeshiyo beeleed uu ka socdo deegaan hoos-tago degamada Cadale ee gobolka Sh/dhexe ayaa waxaa soo baxaya eedeeymo loo jeedinaayo Mas’uuliyiinta Dowlada.
Ugaaska iyo Imaamka Mudulood ayaa lagusoo waramayaa in ay ka baaqdeen safar ay ku tegi lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay,ka dib markii ay balankii uga baxeen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka Amniga.
C/raxmaan Cumar Yariisoow iyo Maxamed Abuukar Islaaw ayaa balan-qaaday in ay ka caawinayaan ugaaska iyo Imaamka sidii lagu tegi lahaa goobta lagu dagaalaamayo,hase’eeshee markii la gaaray goortii balanka waxaa ay jawaabi waayeen telfoonadooda.
Waxaa Xogta ay heleeyso MOL ay cadeeyneeysaa in Yariisoow iyo islaaw ay si hoose iskula hadleen,waxaana ceeb ah imaamka iyo ugaaska inta la balamiyo hadana sidaasi loola dhaqmo.
Dadka qaar ayaa leh waxaa ay aheed in ay diidaan dalabka Ugaaska iyo Imaamka hadii aysan fulineeynin balse markii ay ogolaadeen oo wax walbo la isku duba-riday ayeey ka baxeen ceeb ayeeyna ku tahay.
Ilaa hada lama ogo sababta rasmiga ah ee arrinkaan hase’yeeshee dadka qaar ayaa aaminsan in ay labo mid tahay in aysan rabbin in colaada Walaalahood la dhameeyo ama Villa Soomaaliya lagala soo hadlay.
Previous article(Deg Deg) Kooxda Al Shabaab oo la wareegtay magaalada Balcad
Next articleWariye C/raxmaan Sh Cabdikariin Cali oo ku geeryooday dagaal ka dhacay Xeraale!!